साथीहरूसँग घडी 8
के क्रिसमस एक धर्मशास्त्रको लागि कुनै विशेष अर्थ छ, र यदि त्यस्ता कुरा हो?
क्रिसमसको अर्थ थियोसोफिस्टमा छ भन्नुको मतलब उहाँकै जातीय वा धार्मिक विश्वासहरूमा ठूलो हिसाबले निर्भर हुन्छ। थियोसोफिस्टहरूलाई पूर्वाग्रहहरूबाट मुक्त गरिएको छैन, तिनीहरू अझै पनि नश्वर हुन्। थियोसोफिस्टहरू भन्नुपर्दा, थियोसोफिकल सोसाइटीका सदस्यहरू, हरेक राष्ट्र, जाति र धर्मका हुन्। तसर्थ यो केहि थिसोफिस्टको पूर्वाग्रहहरू के हुन सक्छ भन्नेमा निर्भर हुन्छ। त्यहाँ थोरै व्यक्तिहरू छन्, जसको विचारधारा थेसोफिकल सिद्धान्तको समझले व्यापक हुँदैन। ख्रिष्ट र क्रिसमसलाई हिब्रूले बुझ्छ कि ऊ थिओसफिस्ट हुनु भन्दा पहिले भन्दा धेरै फरक थियो। क्रिश्चियन र सबै जाति र सम्प्रदायका सबैले यस्तै गर्छन्। थिसोफिस्टद्वारा क्रिसमससँग जोडिएको विशेष अर्थ यो हो कि ख्रीष्ट एक व्यक्तिको सट्टा एक सिद्धान्त हो, सिद्धान्तले दिमागलाई अलगपनको ठूलो भ्रमबाट मुक्त गर्दछ, मान्छेहरूको आत्मासँग नजिकको सम्बन्ध राख्दछ र उसलाई सिद्धान्तमा एकताबद्ध गर्दछ। ईश्वरीय प्रेम र बुद्धि। सूर्य वास्तविक ज्योतिको प्रतीक हो। सूर्य आफ्नो दक्षिणी कोर्सको अन्तमा डिसेम्बरको 21st दिनमा मकर राशिको चिह्नमा जान्छ। त्यसपछि त्यहाँ तीन दिनहरू छन् जब त्यहाँ तिनीहरूको लम्बाइमा कुनै वृद्धि छैन र डिसेम्बरको 25th दिनमा सूर्यले उसको उत्तरी मार्ग शुरू गर्दछ र त्यसैले यो जन्मको रूपमा भनिएको छ। पुरातन मानिसहरूले यस अवसरलाई चाडहरू र रमाईलोसँग मनाउँथे, सूर्यको आगमनसँगै हिउँद बित्नेछ भन्ने कुरालाई थाहा पाएर बीजलाई ज्योतिको किरणहरूले फल फलाउँदछ र सूर्यको प्रभावले पृथ्वीले फल दिन्छ। एक थिसोफिस्टले क्रिसमसलाई धेरै दृष्टिकोणबाट हेरेका छन: सूर्यको जन्मको रूपमा चिन्ह मकरमा, जुन शारीरिक संसारमा लागू हुन्छ; अर्कोतर्फ र सत्य अर्थमा यो प्रकाशको अदृश्य सूर्य, ख्रीष्टको सिद्धान्तको जन्म हो। एक सिद्धान्तको रूपमा ख्रीष्ट जन्मनुपर्दछ भित्र मानिस, जसमा मानिस अज्ञानको पापबाट बचाईन्छ जसले मृत्यु ल्याउँदछ, र जीवनको अवधि सुरु गर्नुपर्दछ जुन उनको अमरत्वमा डोर्‍याउँछ।
के यो सम्भव छ कि येशू एक वास्तविक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, र त्यो क्रिसमस डे मा जन्मिएको थियो?
यो सम्भावित भन्दा बढी हो कि कोही देखा पर्‍यो, कि उसको नाम येशू वा अपोलोनिस, वा अरू कुनै नाम हो। आफूलाई ईसाई भनेर सम्बोधन गर्ने लाखौं व्यक्तिहरूको संसारमा यस तथ्यको गवाही छ कि महान् सत्य सिकाउने कोही यस्तो व्यक्ति भएको हुनुपर्छ जस्तै उदाहरणका लागि डाँडाको उपदेशमा ख्रीष्टियन भनिएको छ। सिद्धान्त।
यदि येशू एक वास्तविक मानिस हुनुहुन्छ भने किन कि हामीले बाइबिल बयान भन्दा धेरै मानिसको जन्म र जीवनको कुनै ऐतिहासिक रेकर्डहरू छैनौ?
यो सत्य हो कि येशू वा उहाँको जीवनको कुनै ऐतिहासिक अभिलेख हामीसँग छैन। यहाँसम्म कि जोसेफसमा येशूलाई लेखिएको सन्दर्भलाई पनि अधिकारीहरूले एक प्रक्षेपण गरेका थिए। यस्तो अभिलेखको अभाव मा सानो महत्त्वको छ किनकि शिक्षाको सेटलाई एक चरित्रको वरिपरि समूहीकृत गरिएको छ वा छैन यो एक काल्पनिक वा वास्तविक चरित्र हो। शिक्षा अवस्थित छ र संसारको एक महान धर्म चरित्र को गवाही दिन्छ। येशू जन्मनुभएको वास्तविक वर्ष, सबैभन्दा कट्टरपन्थी ईश्वरशास्त्री पनि निश्चितताको साथ नाम लिन सक्दैनन्। "अधिकारीहरु" असहमत छन्। कोही भन्छन् कि यो AD 1 भन्दा पहिले थियो; अरूले दावी गरे कि यो AD6भन्दा ढिलो भइसकेको थियो। अधिकारीहरूको बाबजुद पनि मानिसहरूले अहिले जूलियन क्यालेन्डरले मान्यता दिएको समयसम्म समाहित गरिरहेछन्। येशू सायद एक वास्तविक मानिस हुन सक्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनको समयमा समग्रमा उहाँ समक्ष अज्ञात हुनुहुन्थ्यो। सम्भावना यो छ कि येशू एक शिक्षक हुनुहुन्थ्यो जसले धेरैलाई आफ्ना चेलाहरू बनाउनुभयो, जसले विद्यार्थीहरूले उनको शिक्षा ग्रहण गरे र आफ्ना शिक्षाहरू प्रचार गरे। शिक्षकहरू प्रायः पुरुषहरू माझ आउँदछन्, तर उनीहरू विश्वमा विरलै चिनिन्छन्। तिनीहरू नयाँ पुरानो सिद्धान्तहरू प्राप्त गर्न र तिनीहरूलाई निर्देशन दिन सबैभन्दा उपयुक्त हुनेको रूपमा छनौट गर्दछन्, तर तिनीहरू आफैं यस संसारमा जान र शिक्षा दिँदैनन्। यदि येशूको पनि त्यस्तै स्थिति भएको थियो भने त्यस समयका इतिहासकारहरूले उहाँलाई चिनेका थिएनन्।
तिनीहरू किन यो कल गर्छन्, डिसेम्बरको 25th, Jesusmass वा येशूको दिनको सट्टा क्रिसमसको, वा कुनै अन्य नामले?
चौथो वा पाँचौं शताब्दी नभएसम्म डिसेम्बरको 25th मा गरिएको समारोहहरूमा क्रिसमस शीर्षक दिइयो। क्रिसमसको अर्थ हो क्रिष्टको समूह, जसको लागि ख्रीष्टको लागि, वा मा आयोजित गरिएको थियो। त्यसकारण अधिक उपयुक्त शब्द येशू जन हुन, किनभने सेवाहरू जो आयोजित थिए र डिसेम्बरको 25th को बिहान गरिएको थियो "मास" भन्ने समारोहहरू, जन्मिएका शिशु येशूलाई थिए। यसपछि मानिसहरू रमाइलो भए, जसले अग्नि र प्रकाशको स्रोतको सम्मानमा यूले लॉग जलाए। आलुबखडा हलुआ, अत्तरहरु र पूर्व देखि बुद्धिमानी मानिसहरू येशूको ल्याइएको जो उपहार betokening गर्ने हो; जसले फोहोर कचौरा (जुन प्रायः घृणित रूपमा मादक पदार्थ बनेका थिए) वरिपरि पार गरे जुन सूर्यबाट जीवन दिने सिद्धान्तको प्रतीक हो, जसले बरफ तोड्ने, नदीहरूको बहाव र रूखहरूमा सार लाग्ने वाचा गरेको थियो। वसन्त मा। क्रिसमस रूख र सदावहार बोटबिरुवाको नविकरणको वाचाको रूपमा प्रयोग गरियो र प्रायः सबैको बीचमा राम्रो भावनाको उपस्थितिमा उपहारहरू आदानप्रदान गरियो।
के येशू र जन्मको जीवनलाई बुझ्न को स्वभाविक तरिका छ?
त्यहाँ छ, र यो कुनै पनी पूर्वाग्रह बिना यो विचार गर्ने को लागी सबै भन्दा उचित को रूप मा प्रकट हुनेछ। जन्म, जीवन, क्रूस परिक्षण, र येशू को पुनरुत्थान को प्रक्रिया को माध्यम बाट प्रत्येक आत्मा जो जीवन मा आउँछ र जो जीवन मा अमरत्व प्राप्त हुन्छ को माध्यम बाट पारित गर्न को प्रतिनिधित्व गर्दछ। येशू को इतिहास को बारे मा चर्च को शिक्षाहरु उहाँ को बारे मा सत्य बाट टाढा जान्छन्। बाइबलीय कथा को एक थियोसोफिकल व्याख्या यहाँ दिइएको छ। मरियम भौतिक शरीर हो। शब्द मेरी धेरै महान धार्मिक प्रणालीहरु मा समान छ, जो ईश्वरीय प्राणीहरु लाई आफ्नो संस्थापक को रूप मा दावी गरेका छन्। शब्द मारा, मारे, मारी, र ती सबै कटुता, समुद्र, अराजकता, महान भ्रम को अर्थ बाट आउँछ। हरेक मानव शरीर यस्तै छ। त्यो समय यहूदीहरु को बीच परम्परा, र केहि अझै पनी यसलाई वर्तमान दिन को लागी, एक मसीह आउन को लागी थियो। यो भनिएको थियो कि मसीह एक पवित्र तरीका मा एक कुमारी को जन्म हुनु थियो। यो सेक्स को प्राणि को दृष्टिकोण बाट बेतुका छ, तर गूढ सत्य संग सही राखीरहेको छ। तथ्य यो हो कि जब मानव शरीर राम्रो संग प्रशिक्षित र विकसित हुन्छ यो शुद्ध, कुमारी, पवित्र, पवित्र बन्छ। जब मानव शरीर शुद्धता को बिन्दु मा पुग्यो र पवित्र छ, यो तब मरियम, भर्जिन भनिन्छ, र बेदाग गर्भ धारण गर्न को लागी तैयार छ। निर्दोष अवधारणा को अर्थ हो कि एक आफ्नै भगवान, दिव्य अहंकार, शरीर को कुमारी भएको fructifies। यो fructification वा अवधारणा मन को एक रोशनी, जो अमरत्व र ईश्वरत्व को आफ्नो पहिलो वास्तविक अवधारणा हो। यो रूपक होइन, तर शाब्दिक हो। यो शाब्दिक सत्य हो। शरीर को शुद्धता बनाए राखीयो, त्यहाँ त्यो मानव रूप भित्र एक नयाँ जीवन शुरू हुन्छ। यो नयाँ जीवन बिस्तारै विकसित हुन्छ, र एक नयाँ रूप अस्तित्व मा भनिन्छ। पछि कोर्स को माध्यम बाट पारित गरीएको छ, र समय आउँछ, यो अस्तित्व वास्तव मा जन्म भएको छ, को माध्यम बाट र त्यो शारीरिक शरीर बाट, यसको कुमारी मेरी, एक अलग र विशिष्ट रूप को रूप मा। यो येशू को जन्म हो जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ धारण गरीएको थियो, अहंकार को ज्योति, र कुमारी मरियम को जन्म भएको थियो, यसको भौतिक शरीर। जसरी येशू आफ्नो प्रारम्भिक वर्षहरु लाई अस्पष्टता मा बिताउनु भएको छ, त्यस्तै यस्तो एक अस्पष्ट हुनु पर्छ। यो येशू शरीर हो, वा उहाँ जो बचाउन आउनुहुन्छ। यो शरीर, येशू शरीर, अमर शरीर हो। येशू संसारलाई बचाउन आउनुभयो भनिन्छ। त्यसैले उहाँ गर्नुहुन्छ। येशूको शरीर शारीरिक रूपमा मर्दैन, र जो एक भौतिक प्राणी को रूप मा सचेत थियो अब नयाँ शरीर, येशू को शरीर, जो मृत्यु बाट बचाउँछ हस्तान्तरण गरीएको छ। येशूको शरीर अमर छ र जो एक येशूलाई भेट्टाउनुभएको छ, वा जसको लागी येशू आउनुभएको छ, अब कुनै स्मृतिमा ब्रेक वा खाली ठाउँ छैन, किनकि उनी त्यसपछि सबै परिस्थितिहरु र परिस्थितिहरु को लागी लगातार सचेत छन्। उहाँ दिन को माध्यम बाट, रात को माध्यम बाट, मृत्यु को माध्यम बाट, र भविष्य को जीवन मा स्मृति मा चूक बिना छ।
तपाईंले ख्रीष्टको एक सिद्धान्तको रूपमा बोल्नुभयो। के तपाईं येशू र ख्रीष्टबीच भेदभाव गर्नुहुन्छ?
त्यहाँ दुई शब्दहरू र ती प्रतिनिधित्व गर्न अभिप्रेरित छन् बीच भिन्नता छ। "येशू" भन्ने शब्द प्राय: सम्मानको खण्डको रूपमा प्रयोग गरियो र यसलाई योग्य ठान्नेलाई प्रदान गरियो। हामीले येशुको ईस्कोर्टिक अर्थ के हो देखाइरहेका छौं। अब “क्रिष्ट” भन्ने शव्द ग्रीकबाट आएको हो "क्रिस्टोस" वा "क्रिस्टोस।" क्रिस्टोस र क्रिस्टोस बीच भिन्नता रहेको छ। क्रिस्टोस एक नियोफाइट वा चेला थिए जो प्रोबेशनमा थिए र प्रोबेशनमा हुँदा, आफ्नो प्रतीकात्मक क्रूसीसनको तयारीका लागि उनलाई क्रिस्टोस भनियो। दीक्षा पछि उनलाई अभिषेक गरियो र क्रिस्टस, अभिषिक्त भनियो। तसर्थ जसले सबै परीक्षाहरू र प्रारम्भहरू पार गरिसकेका थिए र परमेश्वरसँगको ज्ञान पाएका थिए वा उहाँलाई “एक” वा “क्रिस्टो” भनेका थिए। यो सिद्धान्त ख्रीष्टसम्म पुग्ने व्यक्तिमा लागू हुन्छ; तर कुनै निश्चित लेख बिना ख्रिष्ट वा क्रिस्टोस भनेको ख्रीष्ट सिद्धान्त हो र कुनै पनि व्यक्ति हुनुहुन्न। “येशू, ख्रीष्ट” भन्ने उपाधिसँग सम्बन्धित यसको अर्थ यो हो कि सिद्धान्त ख्रीष्टले येशू शरीरको साथ चलाउनुभएको थियो वा यसको बासस्थान लिएको थियो, र येशू शरीरलाई तब येशू ख्रीष्ट भनेर बोलाइएको थियो जो उहाँद्वारा अमर भएको थियो भनेर देखाउन येशू शरीर एक व्यक्तिको रूपमा केवल अमर मात्र थिएन, तर उहाँ अनुकम्पापूर्ण, ईश्वरभक्त, दिव्य पनि हुनुहुन्थ्यो। ऐतिहासिक येशू को रूप मा, हामी सम्झना हुनेछ कि येशू बप्तिस्मा लिनु नभएसम्म उहाँ ख्रीष्ट भनिन थिएन। जब उहाँ यर्दन नदीबाट उत्रिनुभयो, भनिन्छ कि आत्मा उहाँमाथि उत्रनुभयो र स्वर्गबाट ​​एउटा आवाजले भन्यो: "यो मेरो प्यारो छोरो हो, जसमा म प्रसन्न छु।" त्यसपछि येशू येशुलाई ख्रीष्ट भनिनुभयो, वा येशू ख्रीष्ट, जसको अर्थ मानिस-देवता वा ईश्वर-मानिस हुनुहुन्छ। कुनै पनि मानिस आफूलाई ख्रीष्टको सिद्धान्तमा एकतामा ख्रीष्ट बन्न सक्छ, तर मिलन हुनु अघि उसको दोस्रो जन्म हुनुपर्दछ। येशूका यी शब्दहरू प्रयोग गर्न, "तपाईं स्वर्गको राज्यको हकदार हुनु भन्दा पहिले तपाईं नयाँ गरी जन्मनुपर्दछ।" यसको अर्थ यो हो, उहाँको शारीरिक शरीर एउटा शिशुलाई पुनर्जाति थिएन, तर त्यो मानवको रूपमा जन्मनुपर्दछ। उनको शरीरबाट वा अमर प्राणीको रूपमा, र त्यो जन्म येशू, उहाँको येशूको जन्म हुनेछ। तब मात्र स्वर्गको राज्यको अधिकार गर्न सम्भव छ, किनकि कुमारी शरीरमा येशू गठन गर्नु सम्भव छ तर ख्रीष्टको सिद्धान्त यत्तिको गठन गर्न सम्भव छैन किनकि यो धेरै टाढाबाट हटाइएको छ। शरीर र एक अधिक उच्च विकसित वा विकसित शरीर को माध्यम ले प्रकट गर्न आवश्यक छ। तसर्थ, अमर शरीरलाई येशू भनिन्छ वा कुनै अन्य नामद्वारा ख्रीष्टको अगाडि विकसित गर्नु आवश्यक छ किनकि लोगोहरू, वचनले मानिसलाई प्रकट गर्न सक्छ। यो याद राख्नेछ कि पावलले आफ्ना सहकर्मीहरू वा चेलाहरूलाई आग्रह गरे कि उनीहरूको भित्र ख्रीष्ट नबनिउन्जेल काम गर्न र प्रार्थना गर्नू।
डिसेम्बरको 25th दिवस मनाउनको लागि त्यहाँ कुन विशेष कारण येशूको जन्म भएको जस्तो छ?
कारण यो हो कि यो प्राकृतिक मौसम हो र यो कुनै अन्य समयमा मनाउन सकिन्छ; चाहे त्यो खगोलविद्को दृष्टिकोणबाट लिइएको हो, वा ऐतिहासिक मानव शारीरिक शरीरको जन्मको रूपमा, वा अमर शरीरको जन्मको रूपमा, मिति डिसेम्बरको 25th दिनमा हुनुपर्दछ, वा सूर्य साइन मकरमा जान्छ। प्राचीनहरूले यो राम्रोसँग बुझेका थिए, र डिसेम्बरको 25th को बारेमा वा उनीहरूको उद्धारकर्ताहरूको जन्मदिन मनाए। मिश्रीहरूले डिसेम्बरको 25th दिनमा तिनीहरूको होरसको जन्मदिन मनाए; फारसीहरूले उनीहरूको मिथ्रासको जन्मदिन डिसेम्बरको 25th दिनमा मनाउँथे; रोमीहरूले डिसेम्बरको 25th दिनमा उनीहरूको साटर्नलिया, वा सुनौलो युग मनाउँथे, र यस मितिमा सूर्यको जन्म भयो र अदृश्य सूर्यको छोरा थिए; वा, जस्तै उनीहरूले भने, "नातालिस, अ ,्गिक्टि, सोलिस।" वा अजेय सूर्यको जन्मदिन। येशूसँग ख्रीष्टको सम्बन्धलाई उसको कथित इतिहास र सौर्य घटनाबाट थाहा छ किनकि उहाँ, येशू डिसेम्बरको 25th मा जन्मनुभएको थियो जुन दिन सूर्यले मकरको चिह्नमा आफ्नो उत्तरी यात्राको शुरुवात गर्छ, त्यो दिन हो जाडो अस्थिरहरु; तर उसले आफ्नो शक्ति र शक्ति प्राप्त गरेको भनिन्छ कि मेष राशिको चिह्नमा उनले वर्नाल विषुव पार गरे सम्म यो छैन। त्यसबेला पुरातन राष्ट्रहरूले आनन्द र प्रशंसाका गीतहरू गाउनेछन्। यो समय यही हो कि येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। ऊ मृत्युबाट पुनरुत्थान हुन्छ र आफ्नो ईश्वरसँग मिल्दछ। यही कारण हो कि हामी येशूको जन्मदिन मनाउँछौं, र किन “मूर्तिपूजकहरू” ले डिसेम्बरको 25th दिनमा आ-आफ्ना देवताहरूको जन्मदिन मनाए।
यदि मानवलाई ख्रीष्ट बनेको सम्भव छ भने यो कसरी पूरा हुन्छ र यो डिसेम्बरको 25th दिनसँग कसरी छ?
अर्थोडक्स क्रिश्चियन घरमा हुर्केका व्यक्तिहरूका लागि यस्तो भनाइ विधिपूर्वक लाग्न सक्छ; विद्यार्थीलाई धर्म र दर्शनसँग परिचित हुनु असम्भव देखिँदैन; र वैज्ञानिकहरू, कमसेकम, यसलाई असम्भव मान्नुपर्दछ, किनकि यो विकासको कुरा हो। दोस्रो जन्म, येशूको जन्म धेरै कारणका लागि डिसेम्बरको 25th सँग जोडिएको छ, जसमध्ये एक मानव शरीर पृथ्वीको समान सिद्धान्तमा बनेको छ र समान नियमहरू अनुरूप छ। पृथ्वी र शरीर दुबै सूर्यको कानून अनुरूप छन्। डिसेम्बरको 25th दिनमा, वा जब सूर्य मकर राशिको चिह्नमा प्रवेश गर्दछ, मानव शरीर, प्रदान गर्ने यो सबै अघिल्लो प्रशिक्षण र विकासको माध्यमबाट बितिसकेको छ, यस्तो समारोह हुनको लागि उत्तम उपयुक्त हुन्छ। अघिल्लो तयारीहरू आवश्यक हुन् कि पूर्ण नैतिकताको जीवन जिउनुपर्दछ, र दिमाग राम्रोसँग प्रशिक्षित र दक्ष हुनुपर्छ, र कुनै पनि समयको लागि कुनै पनि लाइनलाई निरन्तरता दिन सक्षम हुनुपर्दछ। शुद्ध जीवन, ध्वनि शरीर, नियन्त्रित इच्छा र बलियो दिमागले शरीरको कुंवारी माटोमा जरा लिनको निम्ति ख्रीष्टको सन्तान कहलाइन्छ, र शारीरिक शरीर भित्र एक अर्धको भित्री ईथरियल शरीर निर्माण गर्न सक्षम गर्दछ। - डिभाइन प्रकृति। जहाँ यो गरिएको थियो प्रक्रियाहरू पार पारित गरियो। समय आइपुगेको थियो, समारोह भएको थियो, र पहिलो पटक अमर शरीर जुन लामो समयको लागि शारीरिक शरीर भित्र विकास गर्दै थियो पछिल्लो समय शारीरिक शरीरबाट बाहिर निस्कियो र यस मार्फत जन्मेको थियो। यो शरीर, जसलाई येशू शरीर भनिन्छ, यो सूक्ष्म शरीर वा लिंग शरीरीरा होइन थिओसोफिस्टहरू द्वारा बोलेको हो, न त यो शरीरमा जुन सीएनहरूमा प्रकट हुन्छ वा जुन माध्यम प्रयोग गर्दछ। यसका धेरै कारणहरू छन्, जसमध्ये लि that्ग शरिर वा सूक्ष्म शरीर शारीरिक शरीरसँग जोडिएको छ, धागो वा नाभीद्वारा, जबकि अमर वा येशू शरीर यति जोडिएको छैन। लिंगको शरिर वा माध्यमको सूक्ष्म शरीर बौद्धिक हो, जबकि येशू वा अमर शरीर केवल शारीरिक शरीरबाट अलग र फरक मात्र छैन, तर यो बुद्धिमानी र शक्तिशाली छ र एकदम सचेत र बुद्धिमान छ। यो चेतना गुमाउन कहिल्यै रोकिदैन, न जीवन मा यो जीवन मा एक ब्रेक छ वा जीवन बाट जीवन वा मेमोरीमा खाली छ। जीवन प्राप्त गर्न र दोस्रो जन्म प्राप्त गर्न आवश्यक प्रक्रियाहरू राशिका रेखा र सिद्धान्तको साथ छन्, तर विवरण धेरै लामो छ र यहाँ दिन सकिदैन।